Home - NaeThitMyanmar
ယောင်္ကျားဖြစ်သူက နောက်မိန်းမယူပြီး ယောက္ခမက အိမ်ပေါ်ကနှင်ချလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သားအမိသုံးယောက်….!
လှောင်ကြက်သွန်များ တပိသာ (၅၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့်တောင် ဝယ်ယူသူမရှိလို့ လွှင့်ပစ်ရမည့် အခြေအနေဖြစ်နေ….!
ရိပ်သာမှာ လုပ်အားပေး လာလုပ်တဲ့သူက အဘိုးအဘွားတွေဆီက အလှူငွေများကို လိမ်လည်သွား…..!
သုံးနှစ်သုံးမိုး အမြဲကိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော် ခြေထောက် ဒီဆေးနည်းနဲ့ တွေ့မှ ပျောက်တော့တယ်…..!
မိမိနေအိမ်တွေ ဆိုင်ခန်းတွေမှာ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက်ကင်းပြီး ငွေဝင် လာဘ်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင်….!
ခင်ပွန်းမရှိတော့လို့ ကိုယ်တိုင် တက္ကစီ‌မောင်းပြီး မိသားစု တာဝန်ယူထားတဲ့ အာဂအမျိုးသမီး
ဈေးကွက်လုတယ်လို့ထင် တဲ့အတွက် အမျိုးသား ယာဉ်မောင်းအချို့က သူမကို သိပ်မမြင်မကြည်ကြဘူး။ ခင်ပွန်းဆုံးပါးသွားပြီးနောက် မိသားစုကို ထောက်ပံ ဖို့အ တွက် မမိမိပြုံးဟာ တက္ကစီမော င်းသမားဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်းသစ်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး တခြားအလုပ်လည်း မလုပ်တတ်တာကြောင့် ကလေးေ တွကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် တက္ကစီမောင်း ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသူပါ။...
အိပ်ရာဝင်ခါနီး Live လွှင့်ပြီး သီချင်းဆိုပြရင်း လျို့ဝှက်အလှတွေ ပေါ်သွားတာတောင် မသိလိုက်တဲ့ ပိုပို (ရုပ်သံ)
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် ဦးတင်အေးအတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ဖို့ အလှူငွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဧရာဝတီ မြေပဲဆီစက်ပိုင် သူဌေး ကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ မြန်မာပြည်က ပဲဆီများ အခြေအနေ
ထိုင်း ချဲလ်(၃) လုံးထီကြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု “(ကံကောင်းကြပါစေ)။ မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ယူထားလိုက်ပါ…..။
ဖတ်သွားသူတိုင်း သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ
လှချင်လွန်းလို့ ပိန်ဆေးနဲ့ အသားဖြူဆေးသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးများ အတွက် အန္တရာယ် ကျရောက်ပြီ
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့သူ ဖြစ်နေပါစေ ပေးဆပ်နေရတာ များလာပြီး ချစ်ရတာနဲ့ မတန်တော့ရင် ……..
ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက် ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို ငွေကုန်သက်သာစွာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးနည်း
နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။ နုလုံး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ခွဲစိတ်ချင်သောစိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိသောကြောင့်ထိုဆေးနည်းလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညွှန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ သူငယ်ချင်းအားလည်းမခွဲစိတ်စေချင်ပါအကြောင်းကားခွဲစိတ်မည်ဆိုပါကသိန်း(၁၀)အထက်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏လစာအခြေအနေနှင့် လုံးဝမလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။သူငယ်ချင်းဆုတောင်းပြည့်ပါသည်။ ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာသက်သာသွား၍ဖြစ် လေသည်။ထိုဆေးနည်းမှာ…. (၁)ချင်းစိမ်းသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၂)ကြက်သွန်ဖြူသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၃)ရှောက်ရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၄)ပန်းသီးရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်ထို(၄)ခွက်အားဆတူရော၍ (၃)ခွက်လျှင် (၂)ခွက်ကျန်အောင် ကျိုရပါမည်။ ချင်းစိမ်း ထို(၃)ခွက်(၂)ခွက်စာကျန်ပါကပျားရည်စစ်စစ်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး(၃)ခွက်နှင့်နနွင်းမှုန့်ကွမ်းသီးလုံး(၁)လုံးစာမျှထည့်မွှေပြီးတစ်ညအိပ်နှပ်ထားရပါမည်။ တစ်နေ့လျှင်ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းသောက်ပါ။ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုအသင့်ဝယ်ယူ၍ရနေပါပြီ။ ထိုဆေးနည်းမှာနက္ခတ္တရောင်ခြည်တွင်ဖတ်ရှုရသောမောင်အေးကြူ(စီးပွားရေး)၏နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းဝေဒနာရှင်များအတွက်မှ ထုတ်နုတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသက်သာသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါ၍ထပ်ဆင့်ဝေငှလိုက်ပါသည်….။လိုသူယူသုံးစိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ…။ Credit...ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) naethitmyanmar နှလုံး သှေးကွောကဉျြးပွီး...
ကလေးမလေးကို အားလုံးထင်နေသလို ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ထားပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ မင်းရာဇာ အမျိုးသမီး (ရုပ်သံ)
ရဲတပ်ဖွဲ့ ၄ ခုမှ ကျပ်သိန်း ၆ ထောင်ကျော်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
(၁၁) ကြိမ်မြောက် ကျပ်(၁၀၀၀)တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
(၁၁) ကြိမ်မြောက် ကျပ်(၁၀၀၀)တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်ံထူးရှင်များ ဖြကြပ​စေ နှဈသဈကူးအခြိနျအခါမှာ မွနျမာပွညျတဈဝှမျးနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ရှိကွသူအပေါငျး ကိုယျကနျြးမာလို့ စိတျခမျြးသာပါစေ လိုတိုငျးတ ကွံတိုငျးအောငျပါစကွေောငျး
​ဖောက်​ပြန်​တက်​တဲ့ မိန်းမတစ်​​ယောက်​ကို …… ဒု၊သ၊န၊​သော အ​ကြောင်း သွားမ​ပြောနဲ့ သိမှာမဟုတ်​ဘူး
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို မလုပ်သင့်သည့် အရာများ(ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်)
ကျောက်ဆည်မြို့တွင် (NLD) အောင်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်ခံသူများ မဲဆွယ်ပွဲ လူအင်အား တစ်သိန်းကျော် လှည့်လည်
ကျောက်ဆည်မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အောင်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်ခံသူများ၏ မဲဆွယ်ပွဲ လူအင်အား တစ်သိန်းကျော်ပါဝင်ခဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အောင်နိုင်ရေး အတွက် ထောက်ခံသူများ၏ မဲဆွယ်ပွဲကို ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဝန်းရံထောက်ခံသူ ပြည်သူလူထုအင်အား တစ်သိန်းကျော်ထိ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ထောက်ခံသူများ၏ မဲဆွယ်ပွဲကို...
ခွဲစိတ်ရင် ၁၀ သိန်းအထက် ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ သက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှ ဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ ခွဲစိတ်ချင်သော စိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိသောကြောင့် ထိုဆေးနည်းလေးအား အားကိုးအားထားကာ ဆေးညွှန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ သူငယ်ချင်းအားလည်း မခွဲစိတ်စေချင်ပါ။ အကြောင်းကား ခွဲစိတ်မည်ဆိုပါက သိန်း...
အခုကစပြီး ကျွန်နော်​တို့ မြန်​မာ​တွေ အရိုးပြုတ်​ရည်​ ​သောက်​ကြဖို့ အချိန်​တန်​ပါပြီ
ရိုးတွင်းခြင်​ဆီကို ပြန်​ဖြည့်​​ပေးဖို့​မေ့​နေကြလား… ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးကျေးဇူးများလဲ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ဗျာ ကျ​နော်​တို့ လူအများစုဟာ ကိုယ့်​ကျန်းမာ​ရေးကို ​ကိုယ်​ကာင်း​အောင်​ လုပ်​ကြရာမှာ အခြား​သောကိစ္စ​တွေကိုချည်း အာရုံစိုက်​ ​နေကြတဲ့အတွက်​ ရိုးတွင်းခြင်​ဆီကိစ္စကို ​မေ့​လျော့​နေတတ်​ကြပါတယ်​။ Bone Marrow လို့​ခေါ်တဲ့ရိုးတွင်းခြင်​ဆီဟာဦး​နှောက်​၊ နှလုံး၊ အသည်းပြီးရင်​ အ​ရေးအကြီးဆုံးအစိတ်​အပိုင်းပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ရိုးတွင်းခြင်​ဆီက ဘာ​တွေလုပ်​​ပေးသလဲဆိုရင်​ ခန္ဓာကိုယ်​ရဲ့အလုံးစုံ​သောခုခံအားcell​တွေကို​ မွေးထုတ်​​ပေးခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်​အတွက်​လုပ်​ငန်း​ဆောင်​တာ​တွေကို...
ပျိုမေတို့အတွက် ဂျပန်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခါးသွယ်ပြီး လှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
ခါးသွယ်သွယ်လေးနဲ့ လှရုံတင်မဟုတ်ဘဲ လူရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားကိုပါ မတ်မတ်ကလေးနဲ့ စမတ်ကျလှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းဆို ပျိုမေတို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ခက်ခက်ခဲခဲလည်း မဟုတ်ဘဲ အချိန်အနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးသမားတော် တစ်ဖြစ်လည်း နာမည်ကျော်စာရေးဆရာက စမ်းသပ်ပြီး အကြံပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်သမားတော်...
Liam (3) days before the birth of pregnancy and lacquer Jewish Moe wantahero
ကွမ်းယာ ဆေးလိပ် (ဆေးရွက်ကြီး) ကြောင့် ခံတွင်းကင်ဆာတွေ ဖြစ်ကြတာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ တွေ့ဖူးကြမှာပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတွေ ဘာလို့ သင်္ဘောသီး မစားသင့်တာလဲ
အဝေးပြေးလမ်းမမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ အရေးပေါ်ကား စောင့်နေတဲ့အချိန် ၁၀ ဘီးကားက အရှိန်နဲ့ခေါင်းကို ထပ်ကြိတ်မိ
သေကံပါလာရင်ဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲ၍မရသလို ကယ်သူရှိတာတောင် မလွတ်နိုင်ပါဘူး ဖြစ်စဉ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဖဲ့မြို့ အဝေးပြေးမ်းမအမှတ် ၁၂၉ ပေါ်တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၀၁:၃၀ ချိန်မှာအလုပ်ကပြန်လာတဲ့ အသက်၁၉ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားလေး နိုင်လန်းဆန်းဟာ မတော်တဆ ဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့်ဖြစ်နေချိန် ဘေးမှမြင်တဲ့သူတွေဟာ ဒဏ်ရာရနေသူရဲ့အနေအထားကိုမကိုင်ရဲကြလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအလာစောင့်နေကြပါတယ် ဒဏ်ရာရနေသူကိုမလိုက်မယ် ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်...
ညအိပ်ယာမဝင်ခင် သွားတိုက်သင့်တယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပေမယ့် လူတိုင်းလိုက်မလုပ်ကြပါဘူး။ တစ်နေ့တာလုံး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပင်ပန်းနေပြီမို့ ညဘက်မှာ သွားတိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြသလို၊ ညဘက်မှာ အစာစားပြီး သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်မိတဲ့ နေ့တွေလည်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ရှိဖူးကြမှာပါ။ ညဘက်သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ယာဝင်တာဟာ သင့်ခံတွင်းအတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာလို့သွားတိုက်သင့်သလဲ သွားတိုက်ခြင်းဟာ အဓိကအားဖြင့် သင့်ရဲ့ သွားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပြီး၊ သွားချေးတွေ...
သားအိမ်ကင်ဆာများ ဖြစ်နေပြီလား ဆိုပြီး သံသယဖြစ်နေမိရင် .. မြန်မာ့ ဆေးနည်းတိုလေးကို သတိရပါ
အမျိုးသမီးတွေ လျစ်လျူမရှု့သင့်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာရပ် ၆ ခု သားအိမ်ကင်ဆာဟာ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အစောဆုံးကာလမှာသိရှိထားမှ ဆေးဝါးကုသမှု အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာရပ်တွေကို လျစ်လျူမရှု့ သင့်ပါဘူး။ ဝမ်းဗိုက်ဖောင်းခြင်း နဲ့ လေပွခြင်း နောက်ပိုင်းမှာ အစာစားသုံးဖို့ခက်ခဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားလည်းသိပ်မစားဘဲ အလွယ်တကူဗိုက်ပြည့်နေတာမျိုး လေပွတာမျိုး နေရာတာ သက်ေ...
ဆိုင်ကယ်နဲ့ I phone ရိုက်လုတဲ့ လွတ်/ငြိမ်းနဲ့ လွတ်လာသူများကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
လွတ်/ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်တွေပါ ၁၉-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည(၁၀)နာရီအချိန်ခန့်က ကျုံးဘေးမှာ Scoppy ဆိုင်ကယ်နဲ့ I phone ရိုက်လုတဲ့ ငတိတွေပါ … တံခွန်တိုင်အမြန်လမ်းမဘက်ထွက်ပြေးလာစဉ် တိုင်းမှု/ကူ ခရိုင် မှု/ကူုပည်ကြီးတံခွန် နယ်ထိန်းအဖွဲ့၊ အမရပူရနယ်ထိန်းအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှဖမ်းမိထားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့ ပြန်လာတဲ့ကောင်တွေပါပဲ။ Zaw Moe Thant naethitmyanmar လှတျ/ငွိမျး ခမျြးသာခှငျ့တှပေါ ၁၉-၄-၂၀၂၀ ရကျနေ့...
မင်းထမ်းနိုင်ရင် ဆန်တစ်အိတ် ယူသွားဆိုတော့ မယုံနိုင်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဦးတကယ် ပေးမှာလားတဲ့ ငိုသံလေးနဲ့
မင်းထမ်းနိုင်ရင် ဆန်တအိတ် ယူသွားဆို တော့ ဦး တကယ် ပေးမှာလားတဲ့ ငိုသံလေးနဲ့ (ကြည့်ပီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပြန်တယ် ကလေးရယ်) တစ်နေကုန် တက်တက်ကြွကြွ ပေါ့ပါးလန်းဆန်း နေခဲ့ပြီး ပြန်ခါနီး ခဏကျမှ ကိုယ့်စိတ်တွေလေး သွားရတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ဝေပြီးလို့ ကုန်ပြီ ပြန်ကြမယ်ဆိုမှ ကားနားကိုရောက်လာတဲ့ ကလေး။...
Throughout the world တို့ဘဝagood stepmother to settle cold Khin...
Supporting actor as an extra actor actress becameaseries of art work and survive cold Khin Moh Moh mostly prefers to shoot the...
မီတာရုံးက လိမ်ညာပြီး မီတာခတွေ ပိုကောက်ထားတာကို သက်သေတွေနဲ့ ချပြလိုက်တဲ့ ပြည်သူတဦး….!
တစ်ညနဲ့တစ်မနက် ၂ ခွက် သောက်ရုံရှိသေးတယ် ကျောက်ကျသွားတဲ့ စပါးလင်ဆေးနည်း…..!
ဆရာဝန်တောင်မယုံနိုင်တဲ့ သွေးကြောများအတွင်း ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အဆီတွေကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို….!
(ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ပြီ) ဘုရားသားတော်/သမီးတော်တွေ လမ်းဘေးရောက်ရပြီ…..!
လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ၁၀ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း…!